Ukuhlola nokuhlolwa - iPandawill Technology Co., Ltd
Ikhwalithi evelele, ukwethembeka komkhiqizo kanye nokusebenza komkhiqizo wakho kubalulekile ukukhulisa inani lomkhiqizo kanye nesabelo sakho semakethe. IPandawill izinikele ngokuphelele ekuletheni ubuhle bezobuchwepheshe kanye nezinga eliphakeme kakhulu lenkonzo ngaphakathi kwenhlangano ye-elekthronikhi. Inhloso yethu ukukhiqiza nokuletha imikhiqizo engenasici.
Uhlelo lwethu Lokulawulwa Kwekhwalithi olulandelwa uchungechunge lwezinqubo, izinqubo nokugeleza komsebenzi, luyingxenye edidiyelwe futhi egcizelelwe kakhulu yokusebenza kwethu, ejwayelekile kubo bonke abasebenzi bethu. Kwa-pandawill, siqokomisa ukubaluleka kokuqedwa kwemfucuza, namasu wokukhiqiza ancike, okuvumela ukusebenza kahle, futhi okubaluleke kakhulu, inqubo yokukhiqiza ethembekile futhi ethe xaxa.
Ukuqaliswa kwe-ISO9001: 2008 kanye ne-ISO14001: izitifiketi zango-2004, sizibophezele ekulondolozeni nasekuthuthukiseni ukusebenza kwethu ngokuhambisana nemikhuba emihle yezimboni.
Kwa-pandawill, sisebenzisa amazinga amaningana wokuhlola kumkhiqizo wethu ophumayo. Ukuqala ezintweni ezingenayo futhi kugcine ekufakweni komkhiqizo wokugcina. Sinezindawo zokuhlolwa kokuphrinta kokunamathisela kwe-solder, ukubekwa kweposi, ukugcwala kwangaphambili, izinqubo zokuhlola ze-Article yokuqala nokuhlolwa okuzenzakalelayo kwe-Optical (AOI) Ukusuka lapho babhekwa ngaphansi kwesibonakhulu ngaphambi kokuthuthela enqubweni elandelayo. futhi ekugcineni sigcine emnyangweni wethu Wokulawulwa Kwekhwalithi lapho sineminyaka eminingi yesipiliyoni futhi ngabahloli be-QC abafaneleke kakhulu.
Ukuhlolwa Nokuhlolwa Kubandakanya:
✓ Ukuhlolwa kwekhwalithi eyisisekelo: ukuhlolwa okubukwayo.
✓ Ukuhlolwa kwe-X-ray: ukuhlolwa kwama-BGA, ama-QFN nama-PCB angenalutho.
✓ Ukuhlolwa kwe-AOI: ukuhlolwa kokunamathisela kwe-solder, izingxenye ze-0201, izinto ezingekho kanye ne-polarity.
✓ Ukuhlolwa kwe-In-Circuit: ukuhlolwa okusebenzayo kwezinhlobo eziningi zokukhubazeka kwenhlangano nezakhi.
✓ Ukuhlolwa okusebenzayo: ngokuya ngezinqubo zokuhlola zekhasimende.